Baarlamaanka Soomaaaliya oo ansixiyey xeer hoosaadkoodda. – Radio Daljir
Diseembar 3, 2012 7:01 b 0
Muqdisho, Dec 3, Baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod gacan taag ah ku meel mariyay xeer hoosaadka uu ku shaqeynayo baarlamaanka mudada afarta sano ee baarlamaanka, iyadoo Xildhibaanada ay qodob uga doodeen xeer hoosaadka.
Xeer Hoosaadka oo ka kooban 11-cutub ayaa ugu horeyn xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay sheegeen in loo baahan yahay in wax laga bedelo qodobada qaar ee xeer hoosaadka.
Kulanka ay ka qeyb galeen 188-xildhibaan ayaa dhamaan ay cod gacan taag ah ku ansixiyeen, iyadoo gudoonka baarlamaanka uu ka dhawaajiyay inay ansax tahay xeer hoosaadka uu ku shaqeynayo baarlamaanka afarta sano ee soo socota.
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa sheegay in xeer hoosaadkan uu yahay kii ugu wanaagsanaa, inkastoo qaar ka mid ah ay tilmaameen in loo baahan yahay in erayada qaar la saxo.
Dhinaca kale Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa ka dalbaday Wasiirada Arrimaha dibada iyo Gaashaandhiga inay baarlamaanka hor-yimaadaan si su’aalo looga weydiiyo howlaha wasaaradahooda, iyadoo shalay ay ku ekeyd muddo todobaad ah oo horay loogu baaqay inay Baarlamaanka ku hor yimaadaa.
Gudoonka Baarlamaanka ayaa sheegay in Labada Wasiiro ay howlo shaqo dibada ugu maqnaayeen, isla markaana wixii ka dambeeyay maalmaha soo socda ay ku hor imaanayaan, iyadoo 6-da bishan laga dalbaday inay Baarlamaanka ku hor yimaadaan.